Casemiro Oo Qirtay Hadal Qalad Ah Oo Uu Ka Sheegay Saaxiibkii Fede Valverde Iyo Real Madrid Oo Beddelkiisa Ka Heshay Faransiiska - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Casemiro Oo Qirtay Hadal Qalad Ah Oo Uu Ka Sheegay Saaxiibkii Fede...
Xiddiga khadka dhexe ee Casemiro ayaa sheegay inuu ku qaldanaa hadal uu ka sheegay laacibka ay isku kooxda yihiin ee Fede Valverde oo hadda ka mid noqday tiirarka ay ku taagan tahay Real Madrid.
21 jirka reer Uruguay ayaa xili ciyaareedkan Zinedine Zidane u noqday aasaasi aanu ka maarmi karin, waxaanu boos joogto ah ka helay khadka dhexe oo uu ka cidhiidhsaday Luka Modric, waxaanay isaga iyo Casemiro noqdeen labada ciyaartoy ee kalsoonida jamaahiirta haysta.
Casemiro ayaa mar hore oo la waydiiyey sida uu u arkayo Valverde, waxa uu sheegay in laba sannadood kaddib uu noqon doono mid ka mid ah ciyaaryahannada ugu wanaagsan caalamka ee khadka dhexe, laakiin hadda waxa uu qirtay in hadalkaasi uu ku qaldanaa, waxaanu yidhi: “Waxaan hore u sheegay in laba sannadood gudahood uu noqon doono mid ka mid ah No.8-da ugu wanaagsan caalamka. Laakiin hadalkaas waan ku qaldanaa sababtoo ah, wuu kasoo degdegayaa, xili ciyaareed cajiib ahna wuu qaadanayaa, waxaanu haddaba ka mid yahay ciyaaryahannada noogu muhiimsan, maalin walbana wuu kobcayaa.”
Laacibka reer Brazil waxa kale oo uu sheegay in Valverde uu ka ciyaari karo saddex meelood oo khadka dhexe ah, taasina ka dhigayso ciyaartoy tayo sare leh oo gool illaa gool aanay meelina celinaynin, waxaanu yidhi: “Waa ciyaartoy heer sare, kaliya waa 21 jir, mana aha inaanu saarno culays badan.
“Waxa uu muujiyey dhamaan ciyaarahan fiican, inuu yahay laacib muhiim, waanu deggan yahay. Waxa uu leeyahay tayo uu kaga ciyaari karo meel kasta oo khadka dhexe ah, balse booskiisa ugu fiican waa No.8 oo u ogolaanaya inuu gool ilaa gool socdo. Waxa kale oo u dheer No.8 inuu ka dheeli karo No.5 ama No.6.”
Previous articleDAAWO: Dhacdooyinka Maanta ugu waa weyn Soomaaliya
Next articleAl-Shabaab attacks two military bases in Somalia